Marmara ဒေသ။ | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
Marmara ဒေသကြီးရထားလမ်း, မြို့လမ်းနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုသတင်းဖတ်ရှုဖို့မြေပုံပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ!
Kocaeli မှယာဉ်အသွားအလာကိုသက်သာစေမည့်စီမံကိန်းများသည်အသက်ဝင်လာသည်။ Kocaeli Metropolitan Municipality မှဒေသတွင်းနေထိုင်သူများပိုမိုအဆင်ပြေစွာခရီးသွားလာနိုင်ရန်အတွက်လမ်းများပေါ်တွင်ကတ္တရာခင်းခြင်းနှင့်ကတ္တရာခင်းခြင်းများပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဤ [ပို ... ]
2020 နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်မြေအောက်ရထား Gayrettepe လိုင်းဖွင့်လှစ်ရမည်။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီး Cahit Turhan ကလည်း Istanbul လေဆိပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာတတိယလေယာဉ်ပြေးလမ်းတည်ဆောက်မှုမှာ ဆက်လက်၍ Gayrettepe ကပြောကြားခဲ့သည် [ပို ... ]
Kanal İstanbulစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီး Cahit Turhan ကပြောကြားသည်မှာဘဏ္onာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းမှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ တရုတ်လူမျိုးများလည်းစိတ် ၀ င်စားကြသည်။ သူတို့ [ပို ... ]
Kars Edirne မီးရထားလမ်းသည် Generation Road ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ လမ်းများအတွက်တူရကီရဲ့လေလံ "ဗဟိုစင်္" တစ်ဦးထက်ပိုမြင်သာထင်သာလမ်းအတွက်ဟောပြောပွဲမှစတင်ခဲ့ပြီသားစဉ်မြေးဆက်။ တရုတ်စာနယ်ဇင်းများတွင်“ Baku Tbilisi သည် Kars လိုင်းနှင့်ပေါင်းစည်းထားသည် [ပို ... ]
KadıköyTavşantepeမက်ထရိုနာရီ - လိုင်း၏ 1 စင်မြင့်ကို 2012 တွင်ပြီးစီးခဲ့ပြီး၊ Kadynköyနှင့် Kartal အကြား 21,7 km အပိုင်းရှိ 16 ဘူတာနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ Yakacık-Adnan Kahveci, Pendik နှင့်Tavşantepeဘူတာများ [ပို ... ]
TCDD အထွေထွေအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အကြံပေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲစတင်; TCDD Fenerbahçeသင်တန်းနှင့်နားထောင်ခြင်းသင်တန်းကျောင်းတွင်စီဒီအထွေထွေအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ Fenerbah TCDD အထွေထွေမန်နေဂျာ Ali shsan Uygun ၏ဥက္ကဌအဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ တူရကီသမ္မတနိုင်ငံ [ပို ... ]
TCDD စည်းမျဉ်းကိုတုန့်ပြန်ခြင်း - 'သူတို့ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုဆက်လက်ဖုံးကွယ်သွားကြလိမ့်မယ်'
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်ရထားမတော်တဆမှုများတိုးများလာပြီးနောက်စည်းမျဉ်းအသစ်တစ်ခုရေးဆွဲခဲ့သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်ရထားမတော်တဆမှုများတိုးများလာပြီးနောက်စည်းမျဉ်းအသစ်တစ်ခုရေးဆွဲခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Bursa မြို့ပြမီးရထားလမ်းစီမံကိန်းများသည် ၀ န်ကြီးဌာန၏အစီအစဉ်တွင်မပါ ၀ င်ပါ
Bursa မြို့ပြမီးရထားလမ်းစီမံကိန်းများဝန်ကြီးဌာန၏အစီအစဉ်တွင်မ; hızlıမြန်နှုန်းမြင့်ရထားသတင်းသည်အစီအစဉ်တွင်ပါသော်လည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှ Bursa မျှော်လင့်ထားသည့်တစ်ခုတည်းသောအထောက်အပံ့မှာရထားမဟုတ်ပါ။ မြို့ပြရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိနှင့်နားများသည် Ankara တွင်ရှိသည်။ [ပို ... ]
Metro Istanbul မှ Animated Spread Sitting Alert!
ဗီဒီယိုကို Istanbul Metro မှပြသခြင်း။ မက်ထရိုမက်ထရိုပိုလီတန်မြူနီစီပယ်၏လက်ထောက် Metro Istanbul သည်၎င်း၏လူမှုကွန်ရက်အကောင့်မှကာတွန်းတစ်ခုကိုမျှဝေလိုက်သည်။ Metro Istanbul ၏တရားဝင် Twitter account မှမျှဝေသည် [ပို ... ]
တူရကီ၏ Young ကပြုလုပ်ရန်လာရောက်လေ့လာအသင်း (TUGIAD) ဥက္ကဋ္ဌ Anil AlirızaŞohoğl TSI ထုတ်ဖော်အဆိုပါကိန်းဂဏန်းများ၏ရှင်းပြချက်ထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တူရကီနှင့်သြဂုတ်လအတွင်းအလုပ်လက်မဲ့များအရေအတွက်မှာအသက် 15 2019 နှစ်အတွင်း Turkstat အဆိုအရ [ပို ... ]
Marmaray ဘူတာတွင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တွင်ကျနေသောလူဟောင်းသည်ရထားအောက်တွင်ရှိသည်။ ရထားပျက်ကျမှုကြောင့် Kartal ရှိ Marmaray ဘူတာရုံရှိရထားလမ်းများပေါ်တွင်လဲကျသူများသည်အပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ Kartal ရှိ Atalar Marmaray ဘူတာတွင်ရထားကိုစောင့်နေသော Nihat 88 [ပို ... ]
မြို့ပြမီးရထားလမ်းစီမံကိန်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံအတွင်းမြို့ပြရထားလမ်းစနစ်များပျံ့နှံ့စေရန်တူရကီပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီးဌာနသည်ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးကိုပိုမိုထောက်ခံခဲ့သည်။ အနီရောင်လခြမ်း - yayyolu မှ Ankara ရှိ 2013 [ပို ... ]
12... 1.179 »
YHT ရောက်ရှိလာချိန်တွင် Sivas သို့ခရီးသွား of ည့်သည်အရေအတွက်3သို့တက်လာလိမ့်မည်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (351) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (509) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (502) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (582) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (504) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (970) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)